मोटो जी Plus प्लस बनाम मोटो जी Plus प्लस, विकास। | Androidsis
मोटो जी Plus प्लस बनाम मोटो जी Plus प्लस, विकास।
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | Motorola, मोबाईलहरू, हाम्रो बारेमा
भएको छ यो MWC 2.017 को घोषणा र अपेक्षित प्रस्तुतीकरणहरू मध्ये एक हो। मध्य दायरामा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू मध्ये एकको नवीकरण। व्यर्थमा होइन «शीर्ष पाँच» मा वर्षौं भएको छ पैसाको लागि उत्तम मूल्यको साथ स्मार्टफोनहरूको।
यसको सबै संस्करणहरूमा मोटोरोला मोटो जी, बजारमा देखा पर्नुभएपछि बेस्टसेलर भएको छ। त्यसकारण पट्टी धेरै उच्च छ। र यस नयाँ आगमनकर्ता मोटो जी Plus प्लसमा थोरै दबाब छ यदि यो आफ्नो पूर्ववर्ती सम्म बाँच्न चाहन्छ भने। के यो सफल हुनेछ?
1 मोटो जी Plus प्लस मोटो जी Plus प्लस सँगै रहनको लागि प्रबन्ध गर्दछ?
2 परिवर्तनहरू कस्तो देखिन्छन्?
मोटो जी Plus प्लस मोटो जी Plus प्लस सँगै रहनको लागि प्रबन्ध गर्दछ?
यो कसरी हुन्छ जब स्मार्टफोनको नयाँ संस्करण बजारमा देखा पर्दछ, तुलना अपरिहार्य हुन्छ। समाचार, विकास र सुधारहरू जाँच गर्नुहोस् जुन नयाँ ले जान्दछन् सम्मानको साथ ल्याउँदछ। यही कारणले आज Androidsis मा हामी हामीलाई दुई मोटो जी प्लस बीच भिन्नता देखाउन जाँदैछौं।
पहिलो नजरमा स्पष्ट छ कि परिवर्तनहरू छन्। मोटो जी Plus प्लसको नयाँ संस्करण, यस पटक लेनोभोले, डिजाइन परिवर्तन मा शर्त। केहि अधिक जो यसको अधिक प्रीमियम उपस्थिति को लागि ध्यान आकर्षित गर्दछ। विशेष गरी मध्य-दायरामा क्वान्टेन्सियल "ठूलो" फोन मानीएकोमा।
सुधारहरू, वा एक मोडेल र अर्को बीचको भिन्नताहरू जाँच गर्न, हामी तपाईंलाई यो दृश्यात्मक देखाउँदछौं। तलको तालिकामा तपाइँ पक्षहरू हेर्न सक्नुहुनेछ जुनमा लेनोभोले मोटो जीलाई यसको नयाँ शर्तमा सुधार गरेको छ। हामी देख्न सक्छौं कि प्लास्टिकबाट धातुमा पछाडि भएको परिवर्तन केवल एक मात्र होइन।
ब्रान्ड Motorola Motorola
मोडेल मोटो G4 प्लस मोटो G5 प्लस
अपरेटिङ सिस्टम Android6Android 7
स्क्रिन 5.5 " 5.2 "
प्रोसेसर Snapdragon 617 Snapdragon 625
र्याम 2GB 3GB
भण्डारण 16GB 32GB
ब्याट्री 3.000 mAh 3.000 mAh
अगाडिको क्यामरा Me मेगापिक्सल Me मेगापिक्सल
रियर क्यामेरा Me मेगापिक्सल Me मेगापिक्सल
परिवर्तनहरू कस्तो देखिन्छन्?
मोटोरोला मोटो जी Plus प्लसको नयाँ मोडलका केही उपन्यासहरू आश्चर्यजनक छन्। तपाईंको स्क्रिनको आकार घटाउँदै उदाहरण को लागी जिज्ञासु छ। अघिल्लो मोटो G4 को आकार मा शर्त लगाउन धेरै ब्रान्डको चलनको बिरूद्ध। मोटो G5 ले यसको स्क्रिन कम गर्दछ, तर यो केहि हो यो सुधार गर्न को लागी, यसको रचनाकारहरु अनुसार, उपकरण को डिजाइन र पकड।
हामीले ब्याट्रीमा कुनै सुधार देखेनौं, तर प्रोसेसरको परिवर्तनले यसलाई सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ। ,3.000,००० एमएएचले एक अधिक अनुकूलित उपकरणको साथ केहि बढी फैलाउने वाचा गर्दछ। के यो नयाँ मोटो जी Plus प्लस मार्केटमा आफ्नो ठाँउ पाउनेछ? पहिलो नजरमा, यो एक स्मार्टफोन हो जुन हामी मन पराउँछौं र हामी पहिले नै यसलाई कोशिस गर्न अगाडि हेर्दै छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Motorola » मोटो जी Plus प्लस बनाम मोटो जी Plus प्लस, विकास।
जर्मन डारियो सान्चेज रोआ भन्यो
लेनोवो विश्वास गर्दछ कि मोटोरोलामा अपडेटको एक वर्ष मात्र छोड्दा, यो आशाविहीन पागल भएको छ, त्यसैले नोकियाले मैदान लिन गइरहेको छ र यसका प्रशंसकहरू र ग्राहकहरूमा भरोसा के रहन्छ, लेनोवो आफैंमा राम्रो पक्षको पक्ष लिन्छ वा परिवर्तन गर्दछ। अद्यावधिकहरू वा नराम्रो केटाहरूको राजनीति गर्नुहोस् म यो गर्न गइरहेको छु र एक ब्रांडको सबै सूचनाहरू हुन् जुन मेडियाको हो।
जर्मन डारियो सान्चेज रोलाई जवाफ दिनुहोस्
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो अलार्मलाई टाइमली भनिन्छ र यो यो हामीलाई प्रदान गर्दछ
गुगलले अधिक पिक्सेल कम्प्युटर रिलिज गर्दैन